Airport Bremen Ny Rafi-Pandrefesana - Famolavolana
Ny Rafi-Pandrefesana Ny famolavolana maoderina mifanohitra sy ny fanazavana mazava Hirarchie no manavaka ny rafitra vaovao. Miasa haingana ny rafitra orientation ary handray anjara mahasoa amin'ny kalitaon ny serivisy ho an'ny seranam-piaramanidina. Ny tena manan-danja indrindra eo akaikin'ny fampiasana endritsoratra vaovao, singa mampiavaka mampiavaka ny fampidirana loko samy hafa sy mifanalavitra. Natao manokana teo amin'ny lafiny fiasa sy ara-psikolojika, toy ny fahitana tsara, ny famakiana ary ny firaketana fampahalalana tsy misy sakana. Ny tranga aluminium vaovao miaraka amin'ny taratra LED maoderina no ampiasaina. Nampiana ireo tilikambo famantarana.
Anaran'ny tetikasa : Airport Bremen, Anaran'ny mpamorona : Geissert Thomas, Anaran'ny mpanjifa : TEAMGEISSERT.
Ny Rafi-Pandrefesana Geissert Thomas Airport Bremen